International Travel Insurance | VISITA Travel
HomeTravel InsuranceInternational Travel Insurance
08/02/2018 VISITA Travel Travel Insurance 0
ခရီးတစ်ခုကို စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာ သွားနိုင်ဖို့အတွက် စစ်မှန်တဲ့ ခရီးသွားအာမခံရယူထားပါ။
မြန်မာခရီးသွားများအနေဖြင့် အင်္ဂလန်အခြေစိုက် အာမခံလုပ်ငန်းတခုဖြစ်တဲ့ Expatriate Group မှ ဥရောပနှင့် ကမ္ဘာအနှံ့ (Europe and Worldwide) ခရီးသွားအာမခံများကို ခရီးစဉ်အလိုက်၊ လစဉ် နှစ်စဉ် အလိုက်၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ မိသားစု၊ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းအလိုက်ပါ ဝယ်ယူထားနိုင်ပါသည်။
မကြာမကြာခရီးသွားလေ့ရှိသူများအနေဖြင့် အာမခံဝယ်ယူထားခြင့်ဖြင့် မိမိတို့ ခရီးကို အပူအပင်ကင်းစွာ သွားလာ နိုင်ပါမည်။ ဥပမာ လမ်းခရီးတွင် မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိတာမျိုးဖြစ်လာပါက အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ (သတ်မှတ်ထားချက်အရ) ဆေးကုသမှု ခံယူနိုင်ပါသည်။ ခရီးသွားအာမခံ ရှိမထားပါက မိမိစားရိတ်ဖြင့် အစစအရာရာ အကုန်ကျခံရပါမည်။ လုပ်ငန်းကိစ္စဖြင့် သွားလာရသူများအနေဖြင့် မိမိတို့ Laptop ကအစ အာမခံ ရယူထားနိုင်ပါသည်။
သတိပြုရန်မှာ တချို့ခရီးသွားအာမခံများသည် လုံလောက်သော အာမခံမှုမျိုးမပါဝင်ပဲ ဗီဇာတင်ဖို့ လုံလောက်ယုံသာ ဖြစ်နေတတ်သည်။ တချို့အာမခံများသည့် မြန်မာခရီးသွားများ (မြန်မာလိပ်စာဖြင့်) ဝယ်ယူခွင့်မရှိပေ။ Expatriate Group မှ ခရီးသွားအာမခံများကို မြန်မာပြည်လိပ်စာဖြင့် (မြန်မာပြည်မှာ နေသူများ) တရားဝင်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး စစ်မှန်သော အာမခံမှုမျိုး ပါဝင်တာကြောင့် ခရီးသွားတိုင်း ရှိထားသင့်ပါသည်။
Expatriate Group သည် အင်္ဂလန်နှိင်ငံရှိ Financial Conduct Authority (FCA) ၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ဆောင်ရွတ်သည်။ FCA သည် ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အာမခံလုပ်ငန်း စသည့် ငွေကြေးနှင့် ပါတ်သတ်သည့် လုပ်ငန်းမှန်သမျှကို ကြီးကြပ်သည့် အရေးပါဆုံးသောအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။ FCA Firm reference Number ကတော့ 307133 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်ဖြင့် ခရီးသွားအာမခံ ရယူနိုင်ပါသည်။
ဝယ်ယူဖို့ ဖောင်ဖြည့်ရတာလည်း လွယ်ကူပါသည်။ မိမိတို့ နေရပ်လိပ်စာ၊ အီးလ်မေး နဲ့ မိမိနှစ်သက်ရာ အာမခံမှုမျိုး ရွေးချယ်ယုံပါပဲ။ ဟောဒီ လင့် (link) ကို နှိပ်ပြီး Expatriate Group ရဲ့ website မှာ သွားရောက်ဝယ်ယူပါ။
VISITA Travel is the authorised referral agent of the International Travel Insurance and Healthcare provider, Expatriate Group, who is one of the UK market leaders in hassle-free travel add-ons.
You can coveraspecific single trip or, for total flexibility, an annual policy that covers you for any trip you take abroad; regardless of how often you travel. Withacore international travel insurance policy, additional policy options and destination tailoring, you can adapt cover and premiums to provide you with exactly the right travel insurance solution for you.
For the International Travel Insurance, click the image below.
For the Internation Healthcare Insurance, click the image below.
Find our the full policy wording here.